Ukwenza iMeko yeWordPress kwiShishini: iiProses and Cons | Martech Zone
Ukwenza iMeko yeWordPress kwiShishini: iiProses and Cons
NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, 2016 NgoLwesibini, Novemba 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org Iyakhula kwishishini, isetyenziswa kuwo onke amashishini aphambili kule mihla. Ngelishwa, amashishini amakhulu asadlula kwiWordPress ngenxa yedumela lawo njengeshishini elincinci okanye iqonga lokubloga elizimeleyo. Kwiminyaka yakutshanje, zinikezelwe I-WordPress ilawulwa ngokusingathwa amaqonga avele. Safudukela e Flywheel kuba Martech Zone kwaye bendonwabile ziziphumo.
Kukho izinto ezilungileyo nezingalunganga zokusebenzisa iWindowsPress kwishishini. Ndingafanisa amava e-WordPress kunye nokubaleka. Unemoto (WordPress), umqhubi (abasebenzi bakho), injini yakho (imixholo kunye neeplagi), kunye nomdyarho wakho weembaleki (iziseko zophuhliso). Ukuba kukho enye yezi zinto iyasilela, uyaphulukana nomdyarho. Sibukele iinkampani ezininzi ezinkulu zisilela ngokufuduka kweWordPress kunye nokusola iWindowsPress; nangona kunjalo, asikaze siwubone owona mbandela ubakhona WordPress.
Iinkonzo zeWindowsPress zeShishini
uqeqesho -Ukuba ufuna naluphi na uncedo, iWordPress.org inetoni yezixhobo, i-YouTube ineetoni zevidiyo, kukho iinkqubo zoqeqesho kwiwebhu yonke, kwaye iziphumo zikaGoogle kwizigidi zamanqaku. Singasathethi ke ngezethu Amanqaku e-WordPress, kunjalo.
Ukusetyenziswa koMsebenzi Ngelixa isenokungabi lula ekuqaleni ukwenza ngokwezifiso, ukuvelisa umxholo weWordPress yi-snap. Umhleli wabo womelele ngendlela emangalisayo (nangona iyandikhathaza into yokuba i-h1, h2, kunye ne-h3 izihloko kunye nezihlokwana azikenzi khowudi).
Ukufikelela kwiZibonelelo -Ukukhangela ezinye izixhobo zophuhliso lweCMS kunokuba ngumceli mngeni wokwenene, kodwa ngeWordPress bahlala kuyo yonke indawo. Isilumkiso: Oko kunokuba yingxaki… baninzi abaphuhlisi kunye neearhente eziphuhlisa izisombululo ezibi kakhulu phaya zeWordPress.
Unxibelelaniso -Ukuba uzama ukongeza iifom okanye ukudibanisa nantoni na, uya kuthi ufumane ukudityaniswa kwemveliso kwiWordPress kuqala. Yenza uphando lwe ulawulo lweplagi egunyazisiweyo okanye indawo efana nayo Ikhowudi Canyon, akukho nto ungayi kuyifumana!
Ngokwezifiso Imixholo yeWordPress, iiplagi, iiwijethi, kunye neendidi zeposti zesiko zibonelela ngesixa esingenasiphelo sokuguquguquka. I-WordPress isebenza nzima ukuba ne uthotho lwee-API ezibandakanya yonke imiba yeqonga.
Umthengi weWordPress yeShishini
Ukulungiselelwa -IWordPress yiyo kulungile ngaphandle kwebhokisi xa kufikwa ekusebenziseni i-injini yokukhangela, kodwa ayisiyonto intle. Kutshanje bongeze imephu kwindawo yabo Jetpack plugin, kodwa ayomelelanga kangako Iiplagi ze-SEO zeYoast.
ukwenza -IWordPress ayinakho ukufezekiswa kwesiseko sedatha kunye nokugcina iphepha, kodwa ungayenza ngokulula usebenzisa i-Managed WordPress Host. Ndiza kufuna nasiphi na isisombululo sokuba ne-automated backups, caching page, database database, error logs and virtualization ukuqinisekisa impumelelo yakho.
Lwangaphakathi (I18N) -IWordPress amaxwebhu ungayenza njani imixholo yakho kunye neeplagi, kodwa uswele amandla okudibanisa umxholo wasekhaya kwinkqubo. Siphumeze WPML ngenxa yoku kwaye waphumelela.
ukhuseleko -Ukuba ugunyazisa i-25% yewebhu, ujolise kuko kakhulu. Kwakhona, okunye kokubamba okulawulwayo kunika iplagi ezenzekelayo kunye nokuhlaziywa kwemixholo xa kuvela imiba yezokhuseleko. Ndingacebisa kakhulu ukwakha imixholo yabantwana ukuze uqhubeke nokuhlaziya umxholo womzali oxhaswayo ukunqanda ukubeka indawo yakho emngciphekweni ngomxholo ongenakuhlaziywa.
Isiseko seKhowudi -Izihloko zihlala ziphuhliselwa uyilo olukhulu, kodwa zinqongophele uphuculo olunobunkunkqele kwisantya, ukusebenza kakuhle kunye nokwenza ngokwezifiso. Ingangqinisisa ngokucacileyo ukuba zombini iiplagi kunye nemixholo ziphuhliswa njani. Sisoloko sizifumana siphinda sibhala ukusebenza kwimixholo (esinye isizathu sokusebenzisa imixholo yabantwana).
kwideskithophu -I-WordPress ibonelela ngesisombululo esihlawulelweyo, VaultPress kwii-backups ezingaphandle kodwa ndiyothuka kukuba zingaphi iinkampani ezingaziyo ukuba ayisiyonto ikwibhokisi kwaye kufuneka ibonelelwe ngumphathi wakho okanye inkonzo eyongezelelweyo.
I-WordPress yenza amanyathelo ngamashishini aphakathi naphakathi, nazi ezinye izibalo ezivela efanisa.
tags: Shishiniishishini wordpressWordPressIsiqulatho segamaIimpawu zegamaUlwazi kunye neengozi zegama